I-Coronavirus Bankruptcy: Abathengisi be-Iconic baseMelika batyunyazwe bubhubhane - Ezintsha
Eyona Ezintsha Uluhlu olupheleleyo: UJ. Crew, ezinye ii-Iconic zaseMelika zoChaphazeleka yiCoronavirus
Uluhlu olupheleleyo: UJ. Crew, ezinye ii-Iconic zaseMelika zoChaphazeleka yiCoronavirus
Umqondiso ubonakala kwiwindow yevenkile evaliweyo kaJ. Crew kufutshane neRockefeller Plaza ngoMeyi 4, 2020 kwisiXeko saseNew York.ANGELA WEISS / AFP ngokusebenzisa imifanekiso kaGetty
Ukucima okukhulu kwe-coronavirus bekufanele ukuba kungokwexeshana. Umbono yayikukuhlala-endaweni, unqumamise uqoqosho, usebenzise inkxaso-mali kurhulumente ukuze uthabathe ilahleko yezemali, kwaye ukhethe ngokukhawuleza xa kukhuselekile ukuphuma ngaphandle. Kodwa ubhubhane ubonakalisile kwaye wandise ukungalingani okushiyekileyo kwimali yabantu, amashishini amaninzi ebesele esokola phambi kokuba i-coronavirus ifike kunxweme lwaseMelika ngoku zijamelene nomonakalo osisigxina - okanye ukuvala ngokupheleleyo.
Ukusukela ukuba uninzi lwamazwe luqalise i-odolo yendawo yokuhlala-ngasekupheleni kuka-Matshi, umtya wabathengisi abanyanzelekileyo ukuba banyanzelwe ukuba basebenze abasebenzi, ukungahlawuliswa kwintlawulo yemali mboleko, ukurhweba kakhulu ngesaphulelo, onke amanyathelo anyanzelekileyo okonga imali kunye nokwenza kwelinye icala ubhubhane. Ayizizo zonke iinkampani eziza kuyenza. Nalu uluhlu lwamashishini asemngciphekweni wokuthengisa, aya kuhlaziywa njengoko sifunda ngakumbi.
Iqela leJ. Crew
NgoMvulo, uJ. Crew Group, osebenzela uJ. Crew kunye neMadewell brand, bafaka ukhuseleko kwiSahluko 11 emva kokungafikeleli kwisivumelwano nabathengi. Umthengisi ngoku ufuna i-400 yezigidi zeedola kwezemali ukuxhasa ngemali ukusebenza okuqhelekileyo kweevenkile zayo ezingama-322 ngexesha lokungabinamali. Inkampani ibisindwa yi-1.7 yezigidigidi ematyaleni ngenxa yokuthenga okuxhamliweyo ngamaqumrhu ezemali abucala Ngo-2011.
Ikhonkco lesinxibo se preppy lalinenjongo yokuthatha iMadewell, uphawu lwayo olunenzuzo enkulu, esidlangalaleni kunye nokusebenzisa imali ukuhlawula amanye amatyala e-1.7 yezigidigidi, nge Ijenali yeWall Street. Kodwa isivumelwano siwile ngo-Matshi njengoko iimarike zezemali zithathe ukubetha okubi kwi-coronavirus.
Abazalwana baka Brooks
I-brand ye-posh yabalingane baka-J. Crew i-Brook Brothers ikwimeko yokufota. Ukulwa nomtyala wezigidi ezingama-600 zeedola uhleli kwiphepha lomncono, umthengisi weempahla ezinqabileyo ufuna umthengi, IBloomberg ingxelo ngoLwesihlanu.
Imfihlo yaseVictoria kutshanje izifumene zikwimeko enzima emva kokuba umthengi wabucala wabathengi, iSycamore Partners, esithi ayisenamdla kule nkampani. USycamore ubanga ukuba unelungelo lokuyekisa isivumelwano ngenxa yokuba inkampani yabazali bakaVictoria's Secret, uL Brands, yophule imiqathango yentengiselwano yoqobo ngokusilela ukuhlawula irente ka-Epreli.
UNeiman Marcus ebesezingxoxweni nababolekisi malunga nokugcwalisa iSahluko se-11 ukusukela ngasekupheleni kuka-Matshi, ngokuka IBloomberg . Ivenkile yesebe lezinto zokunethezeka, esele ilwela ukuhlala ifanelekileyo ngexesha le-e-commerce ngaphambi kobhubhane, ijongene nentaba yezigidi zeerandi ezi-4.3 kwaye yaphoswa zizigidi zeedola kwintlawulo yemali mboleko ngo-Epreli. NjengoJ. Crew, umthengisi naye ndaziva ndinetyala ngenxa yokuthengwa kwemali yabucala.
(Ukuhlaziywa ngoJulayi 24) UNeiman Marcus wafaka isicelo sokhuselo lokungabinamali ngoMeyi 7. Nge-24 kaJulayi, ivenkile yesebe yathi iyakwenza njalo vala ngokusisigxina indawo yayo entle ebukekayo eNew York kwisiXeko seevenkile i-Hudson Yards njengenxalenye yohlengahlengiso.
Ivenkile enesitayile seNew York City ivenkile yalahleka ukuhlawulwa kwempahla ka-Epreli kwaye okwangoku ukubonelela ngezaphulelo ezinzulu indawo ebanzi kwibhidi yokutsala abathengi beemveliso.
Kwiveki ephelileyo, inkampani yabazali bakaSaks Fifth Avenue, iNkampani yaseHudson's Bay, ithe iyakwenza njalo kufuneka ndibeke phantsi Abathengisi abangama-507 kwisiXeko saseNew York. Elinye ivenkile yesebe laseHudson's Bay, u-Lord & Taylor, lavala ivenkile yalo eNew York kulo nyaka uphelileyo kwaye lazithengisa ngesiqalo se-100 yezigidi zeedola. NgoFebruwari, iHudson Bay yayi kuthathwe ngasese Usihlalo wayo uRichard Baker kunye neqela labatyali mali.
Iivenkile eziphakathi kwamanqanaba aphakathi zenza ngcono ngcono kancinci. Efana noNeiman Marcus, JCPenney ikwiingxoxo nababolekisi malunga nokukhuseleka okusemngciphekweni wokuhlawula amatyala abo ukunciphisa i-4.3 yezigidi zeedola kumthwalo wawo. Umthengisi uxelwe ukuba ufuna i-1 yezigidigidi zeedola kwimali yokuhlawula amatyala, nge Uboniso lweNtengiso . Inkampani ibisengxakini kule minyaka ilishumi idlulileyo kunye nasehlotyeni elidlulileyo ishukumiselwe ukufumana iindlela zohlengahlengiso njengexabiso lesabelo salo lifakwe ngaphantsi kwe- $ 1.
Sears sele zifakelwe ukhuseleko lokungabinamali kwaye kuvalwe ngaphezu kwe-140 yeevenkile Kwi-2018. Ngoku, kusecicini lokuhamba okwesibini, kwaye okokugqibela, ukubhengezwa, ngokwe Ishishini leCNN , njengoko ubhubhane uqhubeka ukonakalisa ishishini lawo elalisakuba ngumqondiso.
I-Sears ivale okwethutyana onke amagama ayo kunye ne-furloughed uninzi lwabasebenzi benkampani ukusukela oko kwaqhambuka i-coronavirus.
I-Macy's, ngelixa inyanzelwe ukuvalwa kwevenkile kunye nokudilizwa okukhulu njengoontanga bayo, inokuba yenye yevenkile ezimbalwa ezinokuvela kwiingxaki ngaphandle kweSahluko se-11 okanye ukuthengiswa.
Kodwa okokuqala, kufuneka inyuse malunga ne- $ 5 yezigidigidi ekukhutshweni kwetyala ukuxhasa ukusebenza ngobhubhane, I-CNBC uxelwe kwinyanga ephelileyo.
NgoMvulo, ukuvulwa kwakhona kuka-Macy kwavula iivenkile ezingama-68 njengoko amazwe aliqela ekhulule amanyathelo okuvalelwa yedwa. Abahlalutyi abaphezulu kakhulu baqikelela ukuba ixabiso lesabelo sikaMacy, eliwe ngeepesenti ezingama-70 ngonyaka ukuza kuthi ga ngoku, inokutsiba kangangeepesenti ezingama-30 emva kobhubhane, ngokusekwe kwisitokhwe senkampani ngexesha leNgxaki yezeMali ka-2008.
Ukuhlaziywa ngoJulayi 1:
Ukucaphula impembelelo enzulu ye-coronavirus , izihlangu kunye nezinto zefashoni zetyathanga u-Aldo wangena ngokuzithandela kukhuseleko lokungabinamali ngoMeyi 7 kuwo omabini amazwe ase-U.S nakwilizwe lawo, eCanada. Iivenkile zayo eziphantse zibe li-1 000 eMntla Melika ziya kuqhubeka nokusebenza ngelixa inkampani ihamba phantsi kohlengahlengiso lwetyala.
Kwinyanga ephelile, IBloomberg uxele ukuba ingalo yotyalo mali kurhulumente waseQuebec, Investissement Quebec, ibonakalise umdla wokufumana ezinye zeasethi eseleyo yeAldo. La maqela mabini athetha-thethana ngesi sivumelwano.
Ngenxa yokunyuka kwamatyala kunye nokwehla kwebango ngexesha lokuvalwa kwemoto, isigebenga esineminyaka eli-102 ubudala sokuqasha imoto uHertz wangena kwisahluko se-11 esiqhubeka ngoMeyi 22 kwaye kungekudala waqala ukuphelisa iimoto ezinkulu.
Okumangalisa ngokwaneleyo kukuba, uHertz ekuthiwa akanasitokhwe wabona iintsuku ezimbalwa zokunyuka nokuhla emva kokubhengezwa njengongenamali. Ngexesha elinye, isitokhwe sasithengiswa siphezulu kakhulu kangangokuba inkampani wayefuna ukunyusa imali efikelela kwi-500 yezigidi zeedola kwimali yokuhlangula ngokukhupha izabelo ezitsha. Isicwangciso sagqitywa ngenxa yokuchasana okuqinileyo kwe-SEC.
Ikhonkco leevithamini elasekwa embindini woDandatheko Olukhulu laphela lingakwazi ukusinda kubhubhane. I-GNC ifake ukhuseleko kwiSahluko se-11 ngoJuni 23 emva kokuphulukana nomthombo wayo wengeniso kangangeenyanga ezintathu kunye neepesenti ezingama-20 zabasebenzi.
Inkampani iceba ukuvala ukuya kuthi ga kwiivenkile ezili-1,200 kwaye ifumane umthengi omtsha weeasethi zayo ezisele. Kuyafuneka ukuba ixoxisane ngendlela yokuhlengahlengisa phantse i-900 yezigidi zeedola kumatyala abo kunye nababolekisi.
Ukuhlaziywa ngoJulayi 24:
Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-Julayi, i-Ascena Retail Group, inkampani yabazali baka Ann Ann, Lane Bryant kunye no Catherines, bafaka iSahluko 11 njengongenamali bathi bazokuvala phantse iivenkile ezingama 900.
Eyona oyile ye-CBD ilungileyo yokuxhalaba, ukudakumba noxinzelelo- eziPhezulu ezi-5 ngo-2021
Isikhokelo sereferensi 'Gotham' 2 × 16: Ngaba sikho eMhlabeni-2?
IiLayimani ezikhule ngeLebhu: UkuKhazimla kodwa okuNtsokothileyo kuMphambili oMtsha wobucwebe
I-Annette ibvisa imovie entsha ka-2016
yeyiphi eyona ngoma imnandi ka-2016
Iintsuku ezingama-500 zohlalutyo lwasehlotyeni
ngubani onale nombolo yomnxeba